Mpikatroka Tontolo Iainana Mampitandrina Fa Mampidi-doza Ny Hazom-pirenen’i Kolombia Ny Fitrandrahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2016 4:39 GMT
“Valle de Cocora”, Sary avy amin'ilay mpisera Flickr Nuria Pascual. Fizakamanana Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).
Karazan-javamaniry mora marefo avy ao Quindío, Kolombia ny voaniho savok'i Quindío, ary hazo nasionaly ao amin'ny firenena ihany koa. Arovan'ny fepetra isan-karazany napetraky ny governemanta Kolombiana hatramin'ny niatrehan'ny voaniho fandrahonana marobe.
Na izany aza, ny loza vao haingana indrindra natrehan'ity hazo ity dia tao amin'ny faritra izay tokony iarovana azy bebe kokoa: valan-javaboaharim-pirenena.
Orinasam-pitrandrahana ao Salento, Quindio mandrahona ny hazom-pirenen'i Kolombia.
Hatramin'izao, telo fara fahakeliny ireo fanomezan-dalana fitrandrahana mbola miandry ao amin'ny Kaominina Salento, Quindío. Ny sasany amin'ireo faritra dia voalaza fa nangatahan'ny orinasam-pitrandrahana volamena Anglo Gold Ashanti (na dia nilaza aza ny solontenan'izy ireo fa tsy liana amin'izany).
Misy fiantraikany amin'ny tany ao amin'ny Valan-javaboaharim-pirenena Los Nevados, sy ireo faritra isan-karazany sokajiana ho Faritry ny Ala, Valan-javaboary na Distrika Ivom-pitantanana aza izany.
Hadalana ny fanoloana ny fizahan-tany maitso manome asa ao Salento sy Cocora ho fitrandrahana volamena goavana.
Nanatontosa fanangonan-tsonia tao amin'ny Change.org antsoina hoe “Detengan la megaminería en Salento,” (Ajanony ny fitrandrahana goavana ao Salento) i Tatiana Herrera Giraldo, solontenan'ny Kaominina Salento, izay efa nahazo sonia mihoatra ny 8.000. Natao ho an'ny Sampan-draharahan'ny fitrandrahana Nasionaly ao Kolombia sy ny andrim-panjakana hafa ny fanangonan-tsonia. Hoy ny voalaza: “Mety hidiran-doza i Salento, ny Lohasaha Cocora, ny Valan-javaboaharim-pirenena Los Nevados, ary ny hazom-pirenena, ny voaniho savoka raha misy ny fitrandrahana ao Quindío.”
Fitrandrahana tsimifaditrovana! Misaotra
Ankoatra ireo 10 mbola miandry, ireto ireo anarana nahazo alalana tao Salento sy Tolima
Tsy ny voaniho ihany no karazavan-javamaniry mety hidiran-doza.
Ny voanio savoka dia fonenan'ny boloky mavo sofina, karazam-biby tsy ananan'ny hafa sy atahorana ho lany tamingana. Tsy mila fitrandrahana goavana ao Salento.
Araka ny tatitra ao amin'ny gazety El Espectador, eny rehetra eny ny tena loza. Maneho fandrahonana ihany koa ny fitrandrahana hoavy ao amin'ny tahirin'akora mineraly ao La Colosa, ao Cajamarca, Tolima, satria mety misy fiantraikany ao amin'ny lemaky ny reniranon'i Tochecito ahitana indrindra ireo santionana voaniho savoka, ahitana hazo miisa 600.000 eo ho eo.
Nampihetsika ireo mpikatroka, ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ny mety hahatanteraka ireo fandrahonana ny tontolo iainana ireo. Niparitaka miha-hita ao amin'ny media sosialy Kolombiana vao haingana ny resaka, ary antenaina fa hitohy ny hetsika fiarovana ny voaniho savoka:
Sioka: Aza adino rahampitso, tohano ny vondrom-piarahamonina Salento miaraka amin'ny diezy #MiaroNyVoanihoSavokaAho
Sary: Sioka marobe ho firaisankina amin'i Salento, izay miatrika fandrahonana amin'ny fitrandrahana goavaka)na. Misioka mampiasa ny diezy #MiaroNyVoanihoSavokaAho ny rehetra androany Alatsinainy 9 Mey amin'ny 7 ora hariva. Afaka mampiseho ny fanohananao amin'ny fakàna sary ny tenanao miaraka amin'ny hafatra fanohanana ihany koa ianao.
Manantena izahay fa ho fiarovana ny tontolo iainana, tsy hitranga mandrakizay ny faminaniana amin'ity sioka manaraka ity:
Angamba ny fomba tokana hahitana ny voaniho savoka amin'ny hoavy sisa dia amin'ny hajia na vola taratasy.